Foolal cusub iyo Faro caddaana – Bashiir M. Xersi
Foolal cusub iyo Faro caddaana
Posted on 27 Jul 2012 18 Apr 2013 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
Talo ahaan waxaan dhihi lahaa, Xildhibaannada ha soo xulaanOdayaasha dhaqanka, sida kuba xusan heshiisyadii horay loo gaaray, maya, sida saxda ahba, illeen dadkani hoggaan kale ma lahane. Sayaasi isagaa kaalintiisii gabay, una tanaasulay qabqable iyo xaraan ku naaxayaal. Wadaadisagaa kaalintiisii gabay, una tanaauslay Alshabaab iyoargagixiso, sidaa awgeed, Oday dhaqameedyadu waa kaalinta qura ee hartay, ee u taagan hab maamul iyo wax kala dhihid dad.
Haddaanse u laabto warcelinta weydiinta, ani ahaan waxay ila tahay in sidan loo xulo Hoggaanka Odayaasha Dhaqanka: Ugu horrayn waxaa laga billaabayaa xulidda magacyada ma guuraanka ah, sida:Imaam, Ugaas, Boqor, Suldaan, Garaad, Malaaq, Isin, Beeldaajiye, Duub, Wabar IWM. Beelaha aan lahayn magacyda caynkaa ah asee isu dhigma, waxaa laga soo xulayaa Nabaddoonnadooda.
Middan waxaan uga jeedaa inaysan dhicin sidii shirkii Carta oo kale, in beelo aan lahayn Ugaas, aysan madasha shirka ku caleemasaaran Ugaas, illeen waxani waa dhaqan soo jireen ehe, oo ma ahan wax la dhoodhoobi karo laba galline, sidaa awgeed, wa in xulashadu ahaataa dhakawyada dhaqanka iyo dhuuxa Hiddaha, magacyada deegaanba si looga adeegsado, balse, isku wada mid ah, xagga shaqada iyo shiddadaba.
1. In ciidamada shisheeye, ee wadanka ku sugan waqti go’an loo qabto, si ay wadanka uga baxaan, illeen waxaa jira dareen xooggan oo laga qabo ciidamadaane.
2. Qof walba oo ka qaybqaatay dagaalkii sokeeye, ciidan iyo rayid kuu doono ha ahaadee, dadka qaarse la ah inay yihiin Mujaahidiin ama xaq u dirir, waan filaa inaysan u baahnayn inaan anigu magacaabo, inta hormartay ee geeriyootay naga daayee, inta nool naga jira.
3. Qabqablayaasha wadanku u afduubnaa, ee u diiday jid iyo jiho, dadkana ka hoojiyey hoyaad iyo harsiimo, dadka qaarse la ah mudanayaal ama Malaa’ig aan dambiba galin .
4. Xaaraan ku naaxyada ku magacaaban Ganacsato, ee aan ganacsane, dhiigmiiratadda ah, marna afka u dhigto deeqda dunidu ugu yaboohdu dadka dhibaataysan, marka dambana isla deeqdii ama shay iyaga ay keenaan dadka kaga iibiya lacag dheeraad ah iyo Dollar adag
5. Wadaaddada hubaysan iyo inta aragti, af iyo addinba ku taageertay, horaa naloo dagee, haatan yaan mar kale nala dagin.
6. Aqoon yahannada qabiilku madaxmaray, waxna ku soo bartay canshuurtii dawladda, maantase ka door biday inay dalka kala googooyaan, ama inay beel u xamlanaadaan.
Mudane horay uga soo mid noqday dawladihii la dhisay intii burburka lagu jiray, laga soo billaabo “Dwladdii Manifesto” ee Cali Mahdi madaxa ka ahaa, ilaa laga soo gaaro “Dawladda Shareecada” ee Shariif madaxa ka yahay.
Mudadaa intii u dhaxaysay, ninkii soo noqday: Madaxweyne, Ras’isul wasaare, Wasiir ama Xildibaan, waa inuusan dib noogu soo noqon, waxtarkooda iyo wax ku oolkoodba la arage.
8. qofkii xil sare qabanaya, inuusan mushaar iyo biil lahayn, ee ku shaqaynayo iskaa wax u qabso iyo mutadawacnimo ama Folontari, Mushaar iyo biil midna aan la siin, dabcan waa in muddo loo qabtaa middan, aan bal daliil u doono qodobkane, Allaha u naxariistee, Abwaan C/qaadir Xersi “Yamyam” baa wuxuu shirkii Addis Ababa ee dhacay sanaddii 1993-dii ku maansooday sidan:
Liilkan hoose kaga bogo heesta sare ku qoran, oo ay ku xareedinayaan Kooxda Qaylodhaan:
One thought on “Foolal cusub iyo Faro caddaana”